कोरोनाको कहर :यसरी बढाउनुहोस मनोवल ! - Enepalese.com
कोरोनाको कहर :यसरी बढाउनुहोस मनोवल !
गोपाल ढकाल,मनोविद् २०७८ वैशाख २२ गते ९:५९ मा प्रकाशित
कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि हामीलाई आक्रान्त बनाउदै लगेकोछ।मानिसहरुमा डर ,चिन्ता ,भय,तनाव बढेर गएकोछ।विपतिको बेला सामान्य डर,चिन्ता , छट्पटी , तनाव हुनु स्वभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अबस्थामा मानिसले देखाउने स्वभाविक प्रतिक्रिया भनिन्छ।
तर लामो समयसम्मको डर,चिन्ता,भय,तनाव हुनु भने राम्रो होइन।यसले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।तनावले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउछ।कोरोनाको संक्रमणलाइ जित्न रोग – प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुत हुनु पर्छ।
कोरोनाको संक्रमण सँग लड्न शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति आबस्यक पर्छ भने मानसिक वा मनोबैज्ञानिक रुपमा मनोवल ( आत्मवल वा आत्मशक्ति )उच्च हुनुपर्छ।
शरिरिक रुपमा स्बस्थ्य हुन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन संतुलित खानपिन ,ब्यायाम ,प्रयाप्त आराम र निन्द्रा जस्ता कुरामा आबस्यक पर्छ।
जसरी ब्यक्तिको आआफ्नै शारीरिक क्षमता हुन्छ ,त्यसैगरी प्रत्येक ब्यक्तिको आ आफ्नै मानसिक क्षमता हुन्छ जसलाई साइकिक इनर्जी वा आत्मबल वा आत्मशक्ति पनि भनिन्छ।
कुनै कार्यमा सफलता पाउन ,कुनै घटना वा परिस्थितिको सामाना गर्न ब्यक्तिमा भएको मनोवलले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको हुन्छ।
आत्मबल उच्च भएको ब्यक्तिमा आत्मबिस्बास पनि उच्च नै हुने गर्दछ।
( लेखक मनोविद् हुन ।मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा संलग्न छन् । )